टेरिया मगर काठमाडौंमा फिल्म खेल्ने बारे यसो भन्छिन – MeroOnline Khabar
टेरिया मगर काठमाडौंमा फिल्म खेल्ने बारे यसो भन्छिन
काठमाडौं, २ जेठ । भारतको चर्चित डान्स रियालिटी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ र ‘झलक दिखला जा– ९’ की विजेता नेपाली मुलकी तेरिया मगर नेपालमा निकै कम बस्छिन् ।
केही वर्षयता उनी विदेशमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छिन् । भारतमा बसेर अध्ययन गरिरहेकी उनी केही दिनयता काठमाडौंमा छिन् । बुधवार उनी शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘बीर विक्रम २’ को प्रिमियरमा उपस्थिति भएकी थिइन् ।
← इन्डोनेशियाको राजधानी जाकर्ता समुन्द्रमा डुब्नै लागेको हो?
गुहेश्वरी – तिलगंगा पशुपतिको बाटो बन्द →
जागिर पनि कस्ता कस्ता ? अन्त्येष्टिमा रोइदिनुपर्ने अनौठो जागिर